2 Bedroom 2 Bathroom Apt kunye Balcony kunye yokupaka - I-Airbnb
2 Bedroom 2 Bathroom Apt kunye Balcony kunye yokupaka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaisonNets
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMaisonNets iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eli gumbi linesitayile sobuchule, igumbi lokulala eli-2, igumbi lokuhlambela eli-2 libekwe kwindawo enenkcubeko eyahlukeneyo kunye neshishini laseParramatta kwaye inebhalcony enkulu efihlakeleyo enendawo yangaphandle kunye neendawo zokupaka ezikhuselekileyo. Kumgama omfutshane ukusuka kwigumbi lokuhlala ukuya kwiZiko lokuThenga laseParramatta Westfield kunye neSikhululo sikaloliwe saseParramatta, sisenza isiseko esifanelekileyo sabakhenkethi bolonwabo kunye nabashishini.
Ngena kule ndlu inesitayile esihle kwikhitshi evulekileyo / indawo yokuhlala / yokutyela. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libonisa umphezulu webhentshi yamatye, ibha yakusasa enendawo yokuhlala ezi-2, i-oveni yombane, i-4 yokutshisa igesi yokuphekela phezulu, i-dishwasher kunye nefriji egcweleyo. Itafile enesitayile emhlophe yamaplanga-phezulu ihlalisa abantu aba-6. Indawo yokuhlala ineTV enkulu yescreen esisicaba kunye nesofa ebanzi etofotofo enokusetyenziswa njengebhedi ukuba iyafunwa. Iyunithi ye-air-conditioning ye-air-conditioning system ephakanyiswe eludongeni inika induduzo eyongezelelweyo kwixesha eliphezulu lasehlotyeni nasebusika.
Iingcango zeglasi ezityibilikayo zikhokelela kwindawo engaphantsi komhlaba, enencasa enendawo yokuphumla yangaphandle, itafile yekofu kunye nezityalo, indawo elungileyo ye-alfresco yokuphumla kunye nokonwabisa.
Omabini amagumbi okulala aneebhedi ezinkulu kunye neengubo ezinkulu ezakhelwe kwisipili ezibonelela ngeendawo ezininzi zokugcina ukuhlala ixesha elide. Igumbi lokulala eliphambili lineengcango zeglasi ezityibilikayo ezikhokelela kwibalcony, kunye negumbi layo lokuhlambela le-en-suite.
Igumbi lokuhlambela eliphambili lifakwe iithayile kwaye lineshawari ngaphezulu kwebhafu yobungakanani obugcweleyo enescreen seshawa yeglasi. Ukuze kube lula kuwe, indlu inomatshini wokuhlamba kunye nesomisi esahlukileyo.
Indlu iza nendawo yayo ekhuselekileyo yemoto.
EZINYE IZINTO EZIMELE UZIQAPHELE:
* I-40 eyongezelelweyo iya kuhlawuliswa kwitotali yakho ukuba ukungena kuyenzeka emva kwe-8pm, kwaye sifuna ixesha lakho lokufika njengoko i-Concierge ingahlali kwisiza.
* Ucoceko olusisinyanzelo olupheleleyo lwepropathi kunye notshintsho olupheleleyo lwelinen luya kwenziwa rhoqo kwiiveki ezi-4 kwaye longezwe kwisixa sakho sokubhukisha sisonke nakuphi na ukubhukisha ixesha elide kunenyanga. Oku kuya kongezwa kwisixa sakho sisonke kwaye kusetyenzwe ngokwahlukeneyo.
* I-$ 40 eyongezelelweyo / ubusuku iya kuhlawuliswa iindwendwe emva kwe-4 okanye ukuba ibhedi ye-sofa ifuna ukulungiswa.
*Ukuba ufanelekile ukuba ufumane imbuyiselo epheleleyo ngokomgaqo-nkqubo wethu wokurhoxisa, intlawulo yokulungisa i-$50 isasebenza.
*Emva kokungena, ukuba ukhetha ukwenza mfutshane ukuhlala kwakho, uya kufumana i-50% yembuyekezo yobusuku obungasetyenziswanga bokubhukisha kwakho.
* Nceda uqaphele ukuba le ndawo ilungiselelwe ngokukodwa irenti yexesha elifutshane kwaye asiyohotele.
4.48 · Izimvo eziyi-31
I-Parramatta sisixeko esikhulayo sesathelayithi saseSydney esinendawo yaso yorhwebo edumayo kunye nomboniso odlamkileyo wobugcisa. Le ndlu yimizuzu nje emi-5 yokuhamba ukusuka kwiZiko lokuThenga laseParramatta eWestfield, libonelela ngamanqanaba ama-5 okuthengisa asasazeke ngaphezulu kweebhloko zesixeko ezi-5, kunye neevenkile ezinkulu, iicinema kunye nenkundla yokutya. Ikwayimizuzu esi-8 kuphela yokuhamba ukuya eParramatta Park entle enomlambo wokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. Ukuhamba nje yimizuzu emi-5, uya kufumana isitalato seChurch esineendawo zokutyela zaseAsia.
Umbuki zindwendwe ngu- MaisonNets
Inombolo yomthetho: PID-STRA-19827
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Parramatta